कोरोना लागेको पुष्टि भए तुरन्तै १ लाख पाइने तर कहिले र कसरी ? थाहा पाइराखौँ यी तथ्यहरु « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
कोरोना लागेको पुष्टि भए तुरन्तै १ लाख पाइने तर कहिले र कसरी ? थाहा पाइराखौँ यी तथ्यहरु
१६ भाद्र २०७७, मंगलबार ००:००
पछिल्लो समयमा कोरोना बीमा गराउनेहरुको संख्या ह्वातै बढेको छ । बीमा समितिले वैशाख ७ गतेदेखि औपचारिक रुपमा कोभिड-१९ सम्बन्धी बीमालेख जारी गरेको हो ।
बीमा समितिका प्रवक्ता राजु रमन पौडेलले सरकारले एक लाख रुपैयाँको बीमाङ्कमा अनुदान दिने नभएर शुल्कमा अनुदान दिने बताएका छन् ।
बीमितको नाम, कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको मिति र विवरण, पूर्ण रुपमा भरिएको दाबी फाराम तथा भाइरसको पुष्टि भएको परीक्षणको सम्पूर्ण कागजातहरुका सार्थ सरकारबाट मान्यता प्राप्त अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थादेखि डिस्जार्चसम्मका अस्पतालले दिने कागजपत्र हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ। यस्तै स्थानीय निकायले १५ दिन क्वारेन्टिनमा बसेको र कोरोना पुष्टि भएको सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
एक वर्षपछि सरकारले उक्त बीमालाई निरन्तरता दिएमा लागु हुने छ। ‘बीमाको अवधि आगामी असार मसान्तसम्म मात्र लागु हुनेछ यदि सरकारले निरन्तरता दिएमा आगामी दिनमा लागु हुनसक्छ।’
‘संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि सरकारले उपचार गर्छ’ तर संक्रमित व्यक्तिलाई फलफुल, अन्य पौष्टिक आहार लगायतका खर्च हुन्छन्। ती सामान्य आवश्यकता परिपूर्तिका लागि यो बीमालेख हो।’
बीमा समितिका अनुसार नेपालमा अहिले कोरोना महामारी बढेपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानि पनि बढ्दै गएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको रिपोर्ट आउने बित्तिकै दाबी गर्नुस्, त्यसको २४ घण्टाभित्र भुक्तानि हुन्छ।
कोरोना बीमा औपचारिक रुपमा सुरु भएदेखि हालसम्म ८ लाख ९४ हजार तीन सय ४३ बीमकले कोरोना बीमा गरेको बीमा समितिले जनाएको छ।
निषेधाज्ञाको समयमा पनि सजिलै पोलिसी खरिद गर्न सकिने छ। पोलिसी खरिदका लागि मेडिकल र वित्तीय अण्डरराइटिङको आवश्यकता नपर्ने भएकाले अनलाइनमार्फत खरिद गर्न सकिने छ।
नेपालमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको ८० प्रतिशत र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको २० प्रतिशत दायित्व हुने गरी बीमा पुल मार्फत पोलिसी सञ्चालन गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: Sep 1, 2020
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको छ ।